Eyes can speak by နိုင်းနိုင်းစနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Eyes can speak by နိုင်းနိုင်းစနေ
Eyes can speak by နိုင်းနိုင်းစနေ
Posted by zinmyotun on Nov 10, 2010 in Creative Writing | 1 comment
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးက သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား သယ်ဆောင်ပေးပို့ပေးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မျက်လုံးက စကားပြောတတ်တယ်လို့ လူတွေအမြဲပြောကြတယ်။
ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုး သင်ကြုံဖူးသလား? ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို သင်ကြည့်မိတယ်။ ကြည့်ချိန်သိပ်မကြာဘူးဆိုပေမယ့် တကယ်လို့ သူက သူ့ကိုကြည့်နေသူရှိကြောင်း ခံစားမိတဲ့အခါ နေမသိထိုင်မသာ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က လိုအပ်တာထက် ပိုစိုက်ကြည့်နေရင် ဘာမှားယွင်းနေသလဲဆိုပြီး သင့်ကိုယ်သင် ပြန်ကြည့်မိတတ်တယ်။ တကယ်လို့ ဘာမှအမှားအယွင်း မရှိရင် ဒီလိုစိုက်ကြည့်ခံရတဲ့ အကြည့်ကို သင်ဒေါသဖြစ်မိတတ်တယ်။ မျက်လုံးက တကယ်စကားပြောတတ်တယ် မဟုတ်ပါလား?
တစ်ဘက်သားကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့်တဲ့အကြည့်က ရိုင်းစိုင်းရာ၊ ရန်လိုရာရောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် လိင်ကွဲတွေကြားမှာကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေက မတူပြန်ဘူး။ တကယ်လို့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ၁ဝစက္ကန့်ကျော်ကြာ ကြည့်သည့်တိုင် အကြည့်မလွဲချင်သေးဘူးဆိုရင် သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အရမ်းသိသာနေပြီ။ သူကြည့်တာကို မိန်းကလေး သတိထားမိစေချင်လို့၊ မိန်းကလေးကို သူစိတ်ဝင်စားတယ်၊ နှစ်လိုတယ်ဆိုတာကို သိစေချင်လို့ဖြစ်တယ်။
သို့သော်ငြားလည်း သာမန်အားဖြင့် လူနှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အချိန် အချင်းချင်းကြည့်တဲ့ မျက်လုံးအကြည့်က ဒီလို အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်ပါတယ်။ ပြောသူက စကားပြောနေရင်း နားထောင်သူ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်မထောင်ဆိုတာကို မကြာခဏကြည့်တယ်။ နားထောင်သူကလည်း ပြောသူကို မပြတ်စိုက်ကြည့်ရင်း သူစိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေကြောင်းကို ပြတယ်။
တကယ်လို့ သင်နဲ့စကားပြောသူဟာ သင့်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် စိုက်ကြည့်နေရင်၊ သင့်ကို ခြယ်လှယ်လွှမ်းမိုးမယ့်ပုံ ပေါက်နေရင် သင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်တတ်တယ်။ လိမ်ပြောသူတွေဟာ သူလိမ်မယ့်သူ့ကို အကြာကြီးစိုက်ကြည့်ပြီး စကားပြောတတ်တယ်။ ဒါဟာ တစ်ဘက်လူကို သံသယဝင်စေပါတယ်။ လိမ်ပြောသူတွေ ထင်တာက တခြားလူရဲ့မျက်လုံးကို ကြာကြာစိုက်ကြည့်တာဟာ ရိုးသားတဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းလို့ ထင်လို့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ လုံးဝဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေတယ်။
တကယ်တော့ ကြာကြာစိုက်ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေဟာ ချစ်သူတွေနဲ့ပဲ သင့်လျော်တယ်။ ချစ်သူတွေဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အကြည့်နဲ့ အချင်းချင်း အကြာကြီး စိုက်ကြည့်တတ်ကြတယ်။ အပြောနဲ့ထုတ်ဖော်မပြနိုင်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို အကြည့်နဲ့ဖလှယ်ကြတယ်။
ဒါကြောင့် လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်စပ်မှုအနေအထား၊ နေရာအခြေအနေကို ကြည့်ပြီးမှ မျက်လုံးချင်း စကားပြောဆက်သွယ်သင့်ကြောင်း သိသာထင်ရှားစေပါတယ်။
စိုတ်ကြည့်ရင် အလိုက်သိပါ ဆိုတာမျိုးလား …